यदि तपाई टाउको दुखेरे हैरान हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस !
हाम्रो व्यस्थ दैनिकी, अनेक तनाब, दिनभरको काम र थकानले हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखा पर्दछन् । ती मध्य धेरैलाई सताउने समस्या भनेको टाउको दुखाई पनि हो । हामी मध्य धेरैलाई टाउको दुखने समस्याले बारम्बार सताइरहेको हुन्छ । हामी मध्य धेरैले टाउको दुखाई कम गर्न बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका औषधीहरु प्रयोग गर्ने गछौं । तर […]
पोषक तत्वले भरिपूर्ण काँचो नरिवलको पानी स्वाद र स्वास्थको दृष्टिकोणले एकदमै फाइदाजनक छ । यसमा एन्टीब्याक्टेरियल गुण हुन्छ जसले शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई बढाउँछ । नरिवलको पानीले रक्त सञ्चार प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउँछ । यसले रक्तचापको स्तर कम गर्नुको साथै मुटु र मुटुसम्बन्धी रोगको खतरा पनि कम गर्छ । यदि तपाई आफ्नो तौल कम गर्न […]
यदि तपाई मोटोपना हटाउन चाहानुहुन्छ भने, तातोपानी पिउनुहोस् !
पानी मानिसका लागि अत्यावश्यक कुरा हो । हाम्रो शरीरको अधिकांश हिस्सा नै पानीले ओगटेको हुन्छ । चिकित्सक, पोषणविज्ञ मात्र नभएर सौदन्य विज्ञ पनि एक वयस्क मान्छेले स्वस्थ रहनका लागि एक दिनमा ६–७ लिटर शुद्ध पानी पिउनु पर्ने सल्लाह दिन्छन् । चिसो र तातो दुवै प्रकारको पानी पिउने गरिन्छ । तर स्वास्थ्यका लागि भने तातोपानी उपयोगी […]
रक्सीमा हुन्छ यस्तो गुण जसले वंशाणुगत गुणसमेत परिवर्तन गर्न सक्छ
साधारणतः हाम्रा भोजहरुमा एक अतिरिक्त पेयको रुपमा रक्सी या भनौं मादक पदार्थको प्रयोग गरिन्छ । कतिले आज एक दिन त हो नी भनेर पिउन शुरु गर्छन् । र यस्तो कालान्तरसम्म पुग्छ । तर स्वयम रक्सी पिउनेहरुलाई पनि कति कुरा थाहा हुँदैन । रक्सीका कतिपय गुणहरु यस्ता हुन्छन् जुन् झट्ट सुन्दैमा विस्वास पनि लाग्दैन । अमरिकी […]
यदि तपाई लामो जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् यी काम
स्वास्थ्य विज्ञहरुले विश्वभरमा ‘ब्लू जोन’ को विश्लेषण गरेका छन् । जसमा स्वस्थ जीवनशैली तथा आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक विचारका साथ जीवन जिउने मानिसको उमेर लामो हुने तथ्य प्राप्त भएको छ । रिपोर्टहरुका अनुसार ‘ब्लू जोन’का विश्लेषण गर्नेका लागि एक टीम निर्धारण गरिएको थियो, जसमा डाक्टर, मानशास्त्री, पोषणवीदहरुसमेत थिए । ‘ब्लू जोन’ एक मानवविज्ञान धारण हो जो […]
जानिराखौं, भिटामिन र खनिज पाइने खाद्य पदार्थहरु
कपर दिमागका लागि एकदमै जरुरी हुन्छ । हामीले च्याउ, केराउको गेडामा कपर पाइन्छ । दिमागको तागत बढाउन आइरन पनि जरुरी छ । यो हामी बदाम, दाल, हरियो सब्जी र गेडागुडीबाट प्राप्त गर्न सक्छौ‍ । क्याल्सिसमले दिमागलाई तन्दुस्त राख्छः क्याल्सियम, अन्डा दुध दालमा पाइन्छ । म्यागनेसियमले दिमागलाई शक्तिशाली बनाउछ । यो हरियो सब्जी, अन्डा, सोयबिन र […]
तपाई कुन कफी पिउनुहुन्छ ? जसले निर्धारण गर्छ यस्ता व्यवहार !
कडा खानेकुरा मन पराउनेहरुको व्यक्तित्व वा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पनि कडा खालकै हुने एक अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । यदि तपाई मिल्क कफीको सट्टा ब्ल्याक कफी पिउनुहुन्छ र त्यो पनि कडा चाहिन्छ भने तपाईको व्यक्तित्व उदास प्रकृतिको छ वा शत्रुतापूर्ण व्यक्तित्व छ भनेर बुझ्न सकिने अभ्ययनको निष्कर्ष छ । सफ्ट खानेकुरा खानेहरुमा भन्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुमा शत्रुतापूर्ण […]
यदि तपाई सफलता हाशिल गर्न चाहनुहुन्छ भने यी सात सूत्र अवलम्बन गर्नुहोस्
हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा सफलता चाहेका हुन्छन् । यही सफलताका लागि मानिसहरु रातदिन मेहनत गरिरहेका हुन्छन् । तर सधैँ, सबै मानिस सफल हुन सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा सफलता हात पार्न हामीलाई केही सूत्रले सहयोगी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । आउँनुहोस् सफलताका सात सूत्रबारे जानी राखौँ । अगाडि बढ्नु छ भने आफुलाई र अरूलाई हिजोको दृष्टिले होइन […]
थाहा पाउनुहोस्, कुन समयमा नुहाउन उत्तम हुन्छ ?
हामी प्राय दिनानुदिन नुहाउने गर्छौं । तर कुन समय नुहाउने भन्ने विषयले पनि महत्व राख्दछ । अधिकांश मानिस बिहान नुहाउन रुचाउँछन् । त्यसमा केहीले बेलुकाको समय नुहानु राम्रो हुने तर्क पनि गर्छन् । फुर्सदिला मान्छेका लागि दिउँसो फुर्सदमा आनन्दले नुहाउनु अर्को मज्जाको कुरा होला । तर साच्चै भन्ने हो भने कुन समय नुहाउँदा चाहिँ उत्तम […]
नियमित योग गर्नुका फाइदाहरु, कुन–कुन योगासन गर्ने ?
नियमित योग साधनाले गर्भपतन पनि रोकिने तथ्य पत्ता लागेको छ । यस्तै पुरुषको प्रजनन् क्षमता बढ्ने छ । यसका साथै आनुवांशिक कारणले हुने डिप्रेसनका लागि पनि योगले एक थेरापी सरह काम गर्ने छ । हालै गरिएको दुई अध्ययनले यी कुराहरु पत्ता लगाएको हो । योगले बाँझोपन, आनुवांशिक डिप्रेसन र रुमेटाइड अर्थराइटिसजस्ता समस्यालाई थेरापीको रुपमा काम […]
जानिराखौं, हामीले खाली पेटमा खान नहुने कुराहरु
सोडा सोडामा कार्बोनेट एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ । यदि खाली पेटमा सोडा खाने हो भने तमतम लाग्ने तथा असहज महसुस हुन सक्छ । गोलभेँडा गोलभेँडामा एसिडको मात्रा हुन्छ । खाली पेटमा अघुलनशील पदार्थ पैदा गर्छ । खाली पेटमा गोलभेँडा खानु पेटमा पत्थर बन्ने कारणा बन्न सक्छ । औषधि औषधि दिदा नै चिकित्सकले भनेको हुन्छन खाली […]
महिला र पुरुष बीचको सम्बन्ध सदियौं देखि बहस र विवादको केन्द्रमा छ । महिलाले पुरुषलाई नबुझ्ने र पुरुषले महिलालाई नबुझ्ने गुनासो नयाँ कुरा होइन । तर महिलासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नका लागि उनीहरुसँग केही प्रश्न सोध्नै नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । के म तिमीलाई चुम्बन गर्न सक्छु ? कहिल्यै पनि महिलालाई म चुम्बन गर्न सक्छु ? […]
आज भोलिका मानिसहरुको प्रश्न यही हुन्छ हिजोको ह्याङओभर अझै छाडेन । तर ह्याङओभर किन भइरहको छ भन्ने सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । मानिसहरू यसलाई धेरै पिएपछि भएको ह्याङओभर हो भन्छन् । हिलसा माछाको अचार खानु, अण्डा खानु वा ओएस्टर खानु, ह्याङओभर हट्छ पनि भन्छन् । अधिक रक्सी पिएपछि प्राय : मानिसहरू ह्याङओभर भएको बताउँछन् […]
महिलाहरुलाई बुझ्न अप्ठेरो मात्रै होइन् असम्भव पनि छ । धेरैजसो यस्ता कुरा पनि छन् जो महिलाहरुको पेटमा पच्दैन् तर, यस्ता केही कुराको पनि कमी छैन जो कसैलाई भन्दैनन्, खासगरी आफ्नै श्रीमानलाई पनि भन्दैनन् । महिलाहरु भुलेरपनि आफ्ना श्रीमानलाई नभन्ने कुराहरु तपाई यो जानेर हैरानी हुनेछ कि तपाईकी पार्टनर आफ्नो बेष्टफ्रेण्डको विस्तरामा तपाईको पर्फमेन्सका बारेमा सबै […]
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन्,जुन राशि भएका प्रेमी प्रेमिका कहिलेपनी छुट्दैनन् । उनीहरूको सम्बन्छ एकदमै बलियो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार नै १२ राशि रहेका हुन्छन् । ती राशि अनुसार मानिसको स्वभाव आचरण फरक रहेको हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसहरूको प्रेम सम्बन्छ पनि फरक फरक हुने कुरा ज्योतिषहरू बताउँछन् । राशिफलहरूः मिथुन […]
यदि तपाई जीवनसाथी छान्दै हुनुन्छ भने यी गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस् !
प्रेम अन्धो हुन्छ । सायद यही कारणले हुनसक्छ प्रेम सम्बन्धको शुरुको समयमा सबैलाई आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकाको सबैकुरा राम्रो लाग्छ । तर समय बित्दै जाँदा भने एक अर्काको सबै कुरा थाहा हुन्छ र सम्बन्धमा चिसोपना आउँछ । यही कारण कतिपय प्रेम सम्बन्ध तथा विवाह टुट्ने गरेका पनि छन् । हरेक सम्बन्ध विश्वास र भरोसमा टिकेको […]
यस्तो कारणले गर्दा नङ फुल्छ, रहनुहोस् सावधान ! हु
नङको माथिल्लो भागमा कहिलेकाँही सेतो देखिने गर्छ । नङ फुलेको अवस्थालाई लिएर विभिन्न अन्धविश्वासी धारणा पनि पाईन्छ । सेतो नङले नयाँ र राम्रो लुगा लगाउने संकेत मिल्ने परम्परागत धारण छ । तर नङ फुल्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो होइन । समस्या हो । नङ फुल्नुका कारण एलर्जी प्रतिकृया नङ पोलिसको एलर्जीका कारण पनि तपाईको औलाको नङमा […]
हामीले खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुस् यी ५ खानेकुरा, जसले गर्दा ज्यान पनि लिन सक्छ
हामीले खाने खानामा हुने पोषक तत्वले नै हामीलाई बलियो र स्वस्थ बनाउँछन् । तर, ती पोषकतत्वको सन्तुलन मिलेन वा हाम्रो खानपानको शैली मिलेन भने त्यसैबाट जटिल अवस्था पनि निम्तिन सक्छ । शरीरलाई स्वस्थ र स्फूर्त राख्नको निम्ति समय अनुसार खाना खानुपर्छ । खाली पेटमा खान नहुने कुराहरु बिहानको समय धेरै मसालेदार वा पीरो खानेकुरा खानुहुँदैन […]
सजिलै सुगर कम गर्न सकिने घरेलु उपायहरु
सुगर रोग आधुनिक जीवनशैलीको समस्या बन्दै गएको छ । अहिले प्रयोग भइरहेका विषादी युक्त खानाले सुगर रोगी दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । सुगर कन्ट्रोल गर्ने समस्या अहिले धेरै जसोलाई छ । तर कमैलाई मात्रा थाहा हुन सक्छ की सुगर सजिलो गरि कन्ट्रोल गर्न सकिने एउटा उपाय भनेको भाङ्ग पनि हो । अरु विभिन्न रोगहरुको लागि […]
यसरी थाहा पाउनुस् मिर्गौलामा पत्थरी भएको छ की छैन ?
मिर्गौलाले शरीरका हानीकारण पदार्थलाई वाहिर फ्याक्ने र काम लाग्ने तत्वहरुलाई विभिन्न सम्बन्धित अंगमा पठाउने काम गर्छ । मिर्गौलामा हुने पत्थरी मानिसहरुको कमन समस्या जस्तै भएको छ । पत्थरीको समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ ।अस्वस्थ्यकर जीवनशैली र असन्तुलित खानपानका कारण मानिसहरुमा पत्थरीको समस्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय मिर्गौलामा पत्थरी भएका […]